Wonke umntu ulinde iintsuku zasehlobo zaseburhulumenteni, kunye neholide evulekileyo emlanjeni naselwandle, iziqhamo ezinomileyo kunye nokuzonwabisa. Yingakho ieholide zasehlobo zithandwa kakhulu ngabantu abadala kunye nabantwana. Eli holide libonisa ukuphela konyaka wesikolo kunye nokuqala kweeholide kunye neeholide. Iholide yehlobo e-kindergarten iba kubafundi emini, xa bengasadingeki ukuba bavuke kusasa baze baye kwi-kindergarten. Ngako oko, abantwana banqwenela ukuthatha inxaxheba kwiholide ehlobo e-nursergarten.
Ungayilungisa njani le holide ngokufanelekileyo kootitshala? Enyanisweni, yonke into ayinzima nonke. Okokuqala, kufuneka ukhethe imihlobiso yeholo, efanekisela ihlobo. Okokuqala, iintyatyambo kunye nezityalo, kunye neentlobo zee-shell, imifanekiso yolwandle kunye nemifula, imidwebo yelanga kunye nokunye okuninzi. Ngaphambi kweholide, unokumemezela kwi-kindergarten ukuba wonke umntu ufanele afake indlela abona ngayo ikhefu. Makuvumele ukuba umntwana angagqithwanga kumzobo omnye aze abonise yonke into ayifunayo. Xa abantwana beqedile ukudweba, le mizobo inokukhenkceza igumbi kwirejista, apho ieholide zasehlobo ziza kubanjwa. Akuyimfuneko ukukhetha imisebenzi engcono, kuba lo awukho umboniso wee-artists kwi-nursergarten. Hlanganisa yonke into abaye bayifumana. Vumela abazali babo bababaze imifanekiso yabantwana abazithandayo.
Kwakhona, ngeholide ehlobo, unokuza kunye neengubo apho abantwana baya kwenza khona. Akufuneki ukuba nantoni na. Vumela abantwana bembethe ngokukhawuleza, iingubo ezindizayo ezinobumba obuhlaza, obuluhlaza kunye nobuluhlaza. Le mibala ifanekisela ihlobo: ilanga, isanti, ulwandle, imifula, amachibi, amahlathi kunye neminquba.
Ukuba sithetha ngokuthe ngqo ngeso simo, ngoko kwiholide yehlobo, unokubetha yonke into ngohlobo lomdlalo omncinci. Umzekelo, unokuqalisa ngelokuba abantwana bacula ingoma ngokufika kwehlobo. Unako ukuthatha yonke ingoma eyaziwayo neyintandokazi yabantwana baseSoviet "Yiloo nto ihlobo lethu lifana".
Emva koko, iFeiry of Summer ingabonakala kwinqanaba. Nguye omele abe ngumntu oyintloko weeholide kwaye ngokwenene inkokheli yakhe. Vumela i-Fairy I-GAZI izenzele kwaye ixelele ukuba iza njalo ngonyaka ekupheleni kwentwasahlobo ukunika bonke abantwana ithuba elivuyisa kakhulu, ukuphumla okulungileyo kunye nabahlobo abatsha. Emva kokubonisa umntu wakhe, iFairy ibonisa ukuba abantwana baya kukhuphiswano. Umzekelo, ungadlala umdlalo "Ngubani oza kuthatha intyatyambo ngokukhawuleza." Ngokuqhelekileyo, xa ulungiselela imidlalo e-nursergart, khumbula ukuba kufuneka ibe lula ngokwaneleyo ukwenzela ukuba abantwana abazive bengenangqiqo kwaye banganeliseki. Ngoko, yintoni eyona nto ibalulekileyo yomdlalo? Kubalulekile ukubeka izihlalo ezine eziphezulu. Ephantse kwisitulo ngasinye kumacala omabini ngumntwana, kuvela ukuba umdlalo ungathatha inxaxheba kubantu abathandathu. Ngesihlalo ngasinye, kufuneka ubeke intyatyambo. Emva koko, umculo ophucayo, othakazelisayo uqala ukudlala, phantsi kwabo abantwana baphambanisa ngeendlela ezahlukeneyo. Emva koko kuqhutywe ingoma evuyokileyo, ukuze abantwana badonse baze baphazamise. Kwaye xa evele ngokukhawuleza, kufuneka ukhawuleze ugibele esihlalweni uze uthathe intyatyambo. Unqobe abo baneentyatyambo ezandleni zabo.
Emva kolu khuphiswano, abantwana baxelela imibongo embalwa ngemibala eyahlukileyo. Emva koko bavuma ingoma ngehlobo okanye ukudansa umdaniso. Ingaba ngumdaniso wemibala yeyiphi na isitayela (ibhola lamabhola, iindidi). Kwaye ke i-Fairy of Summer izisa ukuba ukususela ngehlobo lixesha lemilingo, lithetha ukuba yintsikelelo yeli xesha lonyaka, iya kukukholisa wonke umntu onamaqhinga. Nazi ezinye iinkcazo onokuzibandakanya kwimeko yeholide ensimini.
I-Fairy inekhadi elikhethiweyo elinesibhozo. Uyazibonakalisa ngomoya kwaye utshele abantwana ukuba wonke umntu afune ukucinga ngeposi eliyithandayo. Ifilo ithembisa ukuba uya kuqiqa ukuba ikhadi lakhe. Emva koko ukhetha enye idilesi, ufihle iposikhadi, uze ubonise ezisixhenxe. Umntwana owenza ikhadi uya kumangaliswa, kuba umntwana oza kuzalwa akayi kuba khona. Enyanisweni, kufuneka ufake indawo yamakhadi kunye nezinye iintsapho. Kwaye ukugqibela ukukhohlisa iFairy kufuneka ibonise ukukhohlisa ngezipho. Ehholo kufuneka udibanise ii rhombus okanye izitya. Yikuphi phantsi kokutshatyalaliswa kwe-wand magic kuya kuvela kwaye ukusuka apho izipho ezihlwaya abantwana ziya kufefa.
Impikiswano yezikolo kunye nezigqibo zabo
Imfazwe ibonakala ngathi?
Isigubhu selo xeshakazi